သတင်းနှင့်ဖြစ်ရပ်များ | ၃၃ နှစ်ကျော် CNC စက် ｜ သတ္တုစက်ထုတ်လုပ်ခြင်းနှင့်ထောက်ပံ့ခြင်း - SEHO
SEHO / ကျွန်တော်တို့ဟာအနှစ် ၃၀ ကျော်အသုံးအများဆုံးစက်တွေရောင်းတဲ့စျေးကွက်မှာရပ်နေခဲ့တယ်။ အသုံးပြုသောစက်များအပြင်ဖောက်သည်အားလုံးအတွက်မတူကွဲပြားသည့်ဖြေရှင်းနည်းများဖြင့်ကျေနပ်ရောင့်ရဲစေရန်အမျိုးမျိုးသော Bridge Mills နှင့် Angular Milling Head အမျိုးမျိုးကိုကျွန်ုပ်တို့ ဆက်၍ ပေးနေဆဲဖြစ်သည်။
SEHO သည်အသုံးများသောစက်ကိရိယာအသစ်များနှင့်ဆက်စပ်ပစ္စည်းများကိုထောက်ပံ့ပေးသည်။ ကျွန်ုပ်တို့သည်ယုံကြည်စိတ်ချရသောတစ်နေရာတည်းတွင်ရှိသောစက်ကိရိယာများကိုပေးသွင်းသူဖြစ်သည်။
နဂါးလှေနေ့ကြောင့်ကျွန်ုပ်တို့၏ရုံးသည်ဇွန် ၂၅ ရက်မှဇွန် ၂၈ ရက်အထိနီးကပ်ပါမည်။ ကျနော်တို့ဇွန်၏တနင်္လာနေ့ 29 ရက်နေ့တွင်ပြန်လာပါလိမ့်မည်
ထုတ်ကုန်အသစ် --- Hydraulic Auto Milling Head
ဟေ့ဒီမှာ! SEHO ကမ်းလှမ်းချက်အသစ် - ဟိုက်ဒရောလစ်အလိုအလျောက်ကြိတ်ခွဲစက် - S87GW, ဒီထောင့်ခေါင်းသည်ကော်လံ၏စက်၏စွမ်းဆောင်ရည်ကိုတိုးတက်စေပြီးခေါင်းကိုပြောင်းလဲသည့်အချိန်နှင့်လည်ပတ်မှုလုပ်ငန်းစဉ်အတွက်အဆင်ပြေစေသည်။ သတင်းအချက်အလက်ပိုမိုလိုအပ်ပါသလား။ ကျေးဇူးပြု၍ ကျွန်ုပ်တို့၏အီးမေးလ်ကို info@sehoworld.com သို့ဆက်သွယ်ပါ။ နောက်ထပ်သတင်းအချက်အလက်များပေးရန်လူတစ်ယောက်ရှိပါမည်။
Tomb Sweeping Day ကြောင့်officeပြီ ၂ ရက်မှAprပြီ ၅ ရက်အထိရုံးသည်နီးနေပြီ။ ကျွန်ုပ်တို့သည်Aprပြီလ ၆ ရက်တနင်္လာနေ့တွင်ပြန်လည်ရောက်ရှိပါမည်။
National Hillilday ကြောင့်ကျွန်ုပ်တို့၏ရုံးသည်ဖေဖော်ဝါရီ ၂၈ ရက်မှမတ်လ ၁ ရက်အထိနီးကပ်ပါမည်။ ကျနော်တို့မတ်လ၏တနင်္လာနေ့ 2nd အပေါ်ပြန်ဖြစ်လိမ့်မည်
ကျွန်ုပ်တို့၏တရုတ်နှစ်သစ်ကူးရုံးပိတ်ရက်သည်ဇန်နဝါရီလ ၂၃ ရက်မှ စတင်၍ ဇန်နဝါရီလ ၃၀ ရက်နေ့တွင်ပြန်လာမည်။ အရေးပေါ်အခြေအနေရှိပါကသင်၏ဆက်သွယ်ရန်အရောင်းဌာနသို့ဖုန်းဆက်ပါ။ ကျေးဇူးတင်ပါတယ်။
၂၀၂၀ ခုနှစ်အစောပိုင်းတွင်သတင်းကောင်းအနေဖြင့် SEHO သည်စက်အသစ်ကိုကမ်းလှမ်းသည် - လက်စွဲစာအုပ်အမျိုးအစားပုံနှိပ်စက်ကိုတိုင်းတာသည့်ကိရိယာဖြစ်သည်
အဆင့်မြင့်နည်းပညာစက်မှုလုပ်ငန်းများတွင်မှို & သေ၊ ဆေးထိုး၊ မိုဘိုင်းဖုန်း၊ တံဆိပ်တုံး၊ ကွန်ပျူတာအရံပစ္စည်းများသို့မဟုတ်ဆီမီးကွန်ဒတ်တာစက်ရုံများမှသတ္တုစက်စက်ဖြင့်အပြီးသတ်ပြီးသောအခါအရေးအကြီးဆုံးအချက်မှာအလုပ်အပိုင်းအစများတည်ရှိနေခြင်းရှိမရှိကိုအသုံးပြုရန်ဖြစ်သည်။ အလုံးစုံအတိုင်းအတာနှင့်ကိုက်ညီမှုလိုအပ်ချက်သေချာစေရန်, တိကျမှန်ကန်မှုသည်းခံစိတ်နှင့်အတူ။ SEHO သည်ပုံရိပ်တိုင်းတာရေးကိရိယာကို 2.5D တိုင်းတာခြင်းလုပ်ဆောင်ချက်ဖြင့်ထောက်ပံ့သည်။ ၎င်းသည်လုပ်ငန်းလည်ပတ်မှုထိရောက်မှုကိုမြှင့်တင်ရန်အတွက်စက်၏တိကျမှန်ကန်မှုရှိမရှိကိုအတည်ပြုနိုင်သည်။
နှစ်ထပ်ကော်လံစက်သည် SEHO ၏ထုတ်ကုန်၏အဓိကအမျိုးအစားတစ်ခုဖြစ်သည်။ သုံးစွဲသူများအနေဖြင့်နှစ်ဆကော်လံစက်၏လိုအပ်ချက်များကိုဖြည့်ဆည်းနိုင်ရန်အတွက်ကျွန်ုပ်တို့သည်လုပ်ငန်းခွဲဇယားကိုပေးသည်။ ဘေးထွက် (သို့) ထောင့်သုံးစက်ကိရိယာများလိုအပ်သူများအတွက်သင့်လုပ်ငန်းလည်ပတ်မှုကိုပိုမိုလွယ်ကူအဆင်ပြေစေရန်ထောင့်ကြိတ်ခွဲစက်၊ roller CAM လည်ပတ်စားပွဲကိုကျွန်ုပ်တို့ကမ်းလှမ်းသည်။ ကျွန်ုပ်တို့၏စက်ပစ္စည်းများကိုကမ်းလှမ်းရန်ကျွန်ုပ်တို့၏ရည်မှန်းချက်သည်ဖောက်သည်များအားစက်နှင့်လုပ်ငန်းခွင်ပတ် ၀ န်းကျင်၏စွမ်းဆောင်ရည်ကိုတိုးတက်စေရန်ကူညီရန်ဖြစ်သည်။ ထို့အပြင်အသုံးပြုထားသောစက်ကိုပြန်လည်တည်ဆောက်စဉ်တွင်ကျွန်ုပ်တို့၏အင်ဂျင်နီယာသည် LED အလုပ်လုပ်သောအလင်း၊ MPG၊ Oil skimmer၊ spindle မှအအေးစသည်တို့သည်ထိုအစိတ်အပိုင်းများသည်အချိန်ကြာလာသည်နှင့်အမျှပျက်စီးခြင်းသို့မဟုတ်ပြိုကွဲခြင်းဖြစ်လိမ့်မည်ကိုတွေ့ရှိခဲ့သည်။ ထို့ကြောင့် SEHO သည်ကျွန်ုပ်တို့ထံမှ ၀ ယ်ယူနိုင်သောစုံလင်သော ၀ န်ဆောင်မှုလုပ်ငန်းစဉ်ကိုဖော်ပြပေးသည်။ ပိုမိုကောင်းမွန်သောလုပ်ငန်းခွင်ပတ် ၀ န်းကျင်နှင့်စက်လည်ပတ်မှုဖြစ်စဉ်၏စွမ်းဆောင်ရည်ကိုမြှင့်တင်ရန်ပန်းတိုင်ထားရန်
HO ပြောပါ ဦး အိုး! အိုး! SEHO ပျော်ရွှင်ပါစေ၊ ပျော်ရွှင်ပါစေ
ကျွန်ုပ်တို့၏နှစ်ဆယ့်ဆယ်ရက်မြောက်သောနေ့ရက်အားလပ်ရက်များကိုအောက်တိုဘာ ၁၀ ရက်တွင်စတင်မည်ဖြစ်ပြီးအောက်တိုဘာ ၁၄ ရက်တွင်ပြန်လည်လုပ်ကိုင်မည်။ အရေးပေါ်အခြေအနေတစ်ခုခုရှိလျှင်၊ သင်၏ဆက်သွယ်ရန်အရောင်းကိုခေါ်ပါ။ ကျေးဇူးတင်ပါတယ်!
ကျွန်ုပ်တို့၏ Moon Festival အားလပ်ရက်များကိုစက်တင်ဘာ ၁၃ ရက်တွင်စတင်မည်။ စက်တင်ဘာ ၁၆ ရက်တွင်ပြန်လာမည်။ အရေးပေါ်ဖြစ်ရပ်များရှိပါက ကျေးဇူးပြု၍ သင်၏ contact sales သို့ဖုန်းဆက်ပါ။ ကျေးဇူးတင်ပါတယ်။
SEHO သည်စက်ယန္တရားများကိုကမ္ဘာအနှံ့ရောင်းဝယ်ဖောက်ကားသည်။ ကျွန်ုပ်တို့၏ဖောက်သည်များကိုအကောင်းဆုံးဝန်ဆောင်မှုပေးနိုင်ရန်အတွက် SEHO ၏တရားဝင်ဝက်ဘ်ဆိုက်သည်ရိုးရာတရုတ်၊ တရုတ်တရုတ်၊ အင်္ဂလိပ်၊ ကိုးရီးယား၊ အိန္ဒိယ၊ အင်ဒိုနီးရှား၊ , မလေးရှား, ဗမာ, ရုရှား, စပိန်, ပိုလန်, ချက်, အာရဘီ။ ကျွန်ုပ်တို့၏ ၀ န်ဆောင်မှုများကိုတိုးမြှင့်နိုင်ရန်အတွက် SEHO ၏တရားဝင်ဝက်ဘ်ဆိုက်အသစ်ကို ၂၀၁၉ Aprilပြီလတွင်စတင်လိမ့်မည် မည်သည့်စက်ကိရိယာများနှင့်ဆက်စပ်ပစ္စည်းမေးမြန်းစုံစမ်းလိုသည်များကိုမဆိုဆက်သွယ်နိုင်ပါသည်။
SEHO သည် ၁၉၉၅ ခုနှစ်တွင်အသုံးပြုသောစက်ယန္တရားများရောင်းဝယ်ဖောက်ကားခြင်းကိုမြှုပ်နှံခဲ့သည်။ အသုံးပြုသူများအတွက်အတွေ့အကြုံများစွာနှင့်အတွေ့အကြုံများစွာရှိသောကျွန်ုပ်တို့၏ဖောက်သည်များအားအကောင်းဆုံးဖြေရှင်းချက်များကိုပေးသည်။ TIMTOS 2019 တွင်ကျွန်ုပ်တို့၏ OEM ထုတ်ကုန်များဖြစ်သော NC plano စက်နှင့် angular ကြိတ်စက်များကိုသင်တွေ့လိမ့်မည်။ TIMTOS 2019 ၌ကျွန်ုပ်တို့ထံလာရောက်လည်ပတ်ရန်ကြိုဆိုပါသည်။